Denmark oo 24 nin oo burcad-badeed Soomaali ah u gacan-gelinaysa Kenya si loogu maxkamadeeyo. – Radio Daljir
Bossaso, June 18 – Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Denmark 24 nin oo burcad-badeed Soomaali ah islamarkaana lasoo qabtay bishii aan kazoo gudubnay ee MAY, laguna hayey markab dagaal dushiis ayaa lagu wareejinaya dalka Kenya si halkaasi loogu maxkmadeeyo.
“24-kaan nin ee burcad-badeeda ah waxaanu u gacangelinaynaa dalka kenya si halkaasi loo maxkmadeeyo waxaana arrinkani uu qabsoomayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ah ? sidaas waxa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay Thomas Winckler oo ah madaxa waaxda cadaaladda ee
wasaaradda arrimaha dibadda ee Denmark.
Thomas Winckler, Waxaa uu intaas ku daray raggaan in loo haysto falal burcad-badeednimo gaar ahaan afduubid markab laga lahaa waddaanka Iiraan, kaasoo faro-cidiye leh looga fujiyey.
12-kii bishii MAY markabka dagaal oo laga lahaa wadankaasi Denmark ee laguna magcaabo Esbern Snare ayaa weeraray markab laga lahaa dalka Iiran oo u afduubnaa kooxafa burcadda Soomaali ah, waxana hawl-galkaasi lagu soo furtay 16 madmaaxayaal Iiraaniyiin ah oo madax-furasho loo haystay Iyadoo hawl-galkaasi ay ku dhinteen afar ka tirsanaa kooxaah budhcad-badeedda Soomaalida.
Raggaan burcad-badeedda Soomaalida ah oo imika lagu hayo markab dagaal dushiis islamarkaana la qorsheynayo in maxkamad Kenyan ah la saaro ayaa waxa lagu soo eedeeyey afduubasho markab ganacsi iyo rasaasaynta shaqaalaha markabka dagaalka oo Denmark ah.